Kune vashandisi vemimhanzi studio | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Ichave iri XNUMX% yehukuru hwekamuri yega yega.
Ndokumbira utore anotevera matanho ekudzivirira hutachiona usati washandisa.
zvakanyanya"XNUMX. Zvikumbiro zvekushandisa" zve "Nezve kushandiswa kwenzvimbo"Maererano ne.
Kuti udzivirire hutachiona hwemadonhwe, ndapota chengetedza chinhambwe pakati pevashandisi uye kudzidzira nekutarisana nemadziro kuitira kuti vasatarisana.
Kuti udzivirire hutachiona hwehukama, dzivisa kugovera chiridzwa nevanhu vakawanda zvakanyanya sezvinobvira.Uye zvakare, kana uchigovana, ndapota ita kuti mushandisi ashandise nesimba.
Kana zvichinetsa kupfeka chifukidzo, senge pakuita chorus kana zviridzwa zvemhepo, zvinokwanisika kutora matanho ekudzivirira kutapukirwa uye kwete kupfeka chifukidzo.Nekudaro, ive shuwa yekupfeka mask panguva yekuzorora.
Shandisa fan hombe yakaiswa mu studio yega yega maminetsi makumi matatu kusvika paawa imwe, vhura magonhi, uye uve nechokwadi chekubuditsa kamuri kunze.
Ndokumbirawo mubve ipapo mushure mekuguma kwekushandisa.
Izvo hazvigoneke kumisa iyo yemhepo kutonhodza, kusanganisira iyo yenguva pfupi kumira.
XNUMX. XNUMX.Chitarisiko chehutano hwevashanyi
Iye munhu anotarisira kushandiswa kweboka anofanira kutarisa mamiriro enyama evatori vechikamu uye kuyera tembiricha neisina-kuonana thermometer (rendi inowanikwa kana zvichidikanwa).Kana paine anenge atora chikamu aine zviratidzo zvakaita sefivha, chikosoro, kana huro, ndapota rega kutora chikamu uye kurudzira kuti vadzokere kumba.Ndokumbirawo kuti muite runyorwa rwevatori vechikamu (zita, ruzivo rwekuonana, nezvimwewo) uye chengetai kwenguva yakati.
XNUMX.Kuvandudza kwenzvimbo yezvivakwa nesangano
Isu tichagadzirira fan hombe kuti ishandiswe kumanikidzwa kufefetedza uye kukurudzira kushandiswa kwayo.
Isu tinokuzivisa iwe nezve izvo zvinhu zvakakumbirwa, sekutumira "chikumbiro chevashandisi vezvivakwa" mu studio.